कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन १२ गते सोमबारको रा’शिफल ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन १२ गते सोमबारको रा’शिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन १२ गते सोमबारको रा’शिफल !
वि.सं.२०७७ साउन- १२,सोमवार, ई.सं.२०२० जुलाई – २७, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० गुँलाथ्व,प्रमादी,दक्षिणायन,वर्षा,श्रावण शुक्लपक्ष तिथि-सप्तमी , ०९:१६ बजे उप्रान्त अष्टमी,नक्षत्र-चित्रा , १३:५३ बजे उप्रान्त स्वाती,योग-साध्य , २४:१२ बजे उप्रान्त शुभ, करण-वणिज ०९:१६ बजेदेखि भद्रा , २०:०२ बजे उप्रान्त तैतिल,चन्द्रराशि-तुला,आनन्दादि योग-मुद्गर,सूर्योदय-५:२५,सूर्यास्त-१८:५४, दिनमान-३३ घडी ४३ पला, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती।
कृष्ण र रुपाको छोरालाई हेर्नुहोस, धेरै पछि मिडिया(भिडियो)
फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौको मुख्य बजारमा रहेको बैंकका सुरक्षा गा’र्डमाथि खु’कु’री प्र’हा’र